Maamulka Gobolka Karkaar oo la kulmay Dhalinyarada Gobolkaas. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maamulka Gobolka Karkaar oo la kulmay Dhalinyarada Gobolkaas.
Maamulka Gobolka Karkaar oo la kulmay Dhalinyarada Gobolkaas.
July 12, 2019 - By: Mohamud Nadif
Gudoomiyaha Gobolka Karkaar Saciid Maxamed Faahiye oo uu weheliyo ku xigeenkiisa Cabdi-Casiis Yuusuf Caamir ayaa kulan la qaatay Ururada Dhalinyarada ee heer Gobol iyo qaar ka mid ah dhalinyarada oo iyagu ka madax-banaan Ururada.
Gudoomiye Saciid Maxamed Faahiye ayaa dhalinyarada uga warbixiyay qorshahiisa shaqo iyo waxyaabaha uu damacsan yahay in ui Gobolka kusoo kordhiyo, wuxuu si qoto-dheer uga hadlay ahmiyada ay leedahay in dhalinyarada iyo Maamulku ay wada shaqeeyaan.
Gudoomiye Saciid Maxamed Faahiye oo horay Waxbarashada degmada uga soo shaqeeyay wuxuu tilmaamey in uu ogyahau baahiya badan oo jira, Caqabadaha haysta dhalinyarada. Waxa uu hoosta ka xariiqay in uu inta karaankoisa wax badan ka qaban doono.
Sii hayaha gudoonka Dhalinyarada Gobolka Karkaar Axmed Muuse Cali oo goobta ka hadlay wuxuu gudoomiyaha iga mahad-naqay waqtiga uu dhalinyarada siiyay. Iyo sida uu ugu baraarugsan yahay kaalinta ay Bulshada kaga jiraan.
Axmed wuxuu xusay in Dalada Dhalinyarada Gobolka Karkaar KEYNET iyo guud ahaanba dhalinyaradu ay u taagan yihiin sidii ay uga shaqayn lahaayeen horumar Gobolka isaguna uu si dhaw ula shaqayn doono.
Qaar ka mid ah dhalinyarada oo iyaguna goobta ka hadlay waxay si isku mid ah u tilmaameen in ay la shaqayn doonaan Gudoonka cusub ee Gobolka, Iyagana ay ka rajaynayaan in ay daboolaan baahiyaha dhalinyarada Gobolka Haysta.